I-European Union iyakuyishenxisa irhafu ekusebenziseni ngokwakho | Ukuhlaziywa okuluhlaza
IPalamente yaseYurophu izinikele ekukhuthazeni ukusetyenziswa kwamandla okuzihlaziya kuwo onke amazwe e-European Union, ukongeza ekubongozeni amazwe ukuba "aqinisekise ukuba abathengi unelungelo loku bazisebenzisele amandla ahlaziyekayo ”.
Ngenxa yoku, bonke abathengi mabagunyaziswe "ukuba bathengise kwaye bathengise intsalela kwimveliso yombane ohlaziyekayo, ngaphandle kokuthotywa iinkqubo zokucalula kunye nezityholo okanye ukungalingani ezingabonisi iindleko.
ICongress ivume isilungiso esicela ukuvumela ukusetyenziswa kombane kwimithombo evuselelekayo yemveliso kwaye ehlala ngaphakathi kwizakhiwo zabo "ngaphandle kokuxhomekeka kwirhafu, imirhumo okanye unikelo lwalo naluphi na uhlobo". Esi silungiso safumana iivoti ezingama-594, i-69 ngokuchasene ne-20 yokuzibandakanya.
I-MEPs ezininzi zeSocialist ziye zaqinisekisa ukuba: "Sikhusele into ebikukulwa, ngokokubona kwam, okukuqinisekisa ukuzisebenzisela njengelungelo. Ukusetyenziswa kwamandla okuzenzela njengelungelo nokususa imiqobo kulawulo kunye ukuthintela amanyathelo anje ngerhafu eyaziwayo kwilizwe lam, irhafu elangeni.
1 Yintoni irhafu elangeni?
2 Uhlengahlengiso lwexesha elizayo
Yintoni irhafu elangeni?
IBhunga labaPhathiswa liphumeze ukuphela kuka-2015, iRoyal Decree ebeka oko kubiza «irhafu yogcino»Ukuzisebenzisela amandla ngokwakho, eyaziwa ngokuba yirhafu elangeni
Ngelishwa, ezona zikrokro zimbi kwimibutho yabathengi, amaqela ezendalo, imibutho yamashishini kunye nenkcaso ziye zazaliseka. Babelumkisa ngale nyaniso ixesha elide, ukusukela oko Iminyaka engama-2 ngaphambili Icandelo loMphathiswa Wezemveliso lazise iinjongo zalo
Ngokusekwe kwingxelo ekhuthaze utshintsho oluthile kwiKhomishini kaZwelonke yeMakethi noKhuphiswano (i-CNMC), kunye nemvume elandelayo yeBhunga likaRhulumente; uRhulumente uwamkele lo mthetho mtsha ngaphandle kwengxaki.
Irhafu yelanga evunyiweyo phantsi kwegunya likaJosé Manuel Soria kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezemveliso ngomnye wale mithetho angaqondwa ngummi. Kutheni iJamani, ilizwe elinelanga elingaphantsi kunathi, ubeke iipleyiti ezininzi ngonyaka kuneSpain kuyo yonke imbali yayo?
Inyani yile yokuba iSpain ibikhuthaza kakhulu amandla ahlaziyekayo ekuqaleni kwenkulungwane, kwaye ibonelela ngeebhonasi kwabo bafaka iipaneli zelanga. Nangona kunjalo, intelekelelo kwintengiso kunye nemilinganiselo yorhulumente we-PP ukusuka ngo-2011 baqala ukuyenza nzima le meko.
Kwimibutho yamazwe aphesheya enje ngeGreenpeace, imele "umgaqo-nkqubo ocacileyo wokohlwaya amandla ahlaziyekayo, ukonga kunye nokusebenza kwamandla."
Ngapha koko, iGreenpeace ibuza uRhulumente ukuba iSpain ube yinkokeli evuselelekayo kwakhona: Bafuna ukuba umthetho woTshintsho lwemozulu lwexesha elizayo ubandakanye i-100% yamandla acocekileyo. Bayakhumbula ukuba kwiminyaka elishumi eyadlulayo babonisa ukusebenza kwabo kwezobuchwephesha nakwezoqoqosho.
Uhlengahlengiso lwexesha elizayo
Xa bebuzwa ngekamva lesi silungiso kuthethathethwano namaqabane oluntu, iiSocialists zinethemba lokuba ziya kuba nenkxaso kwiKhomishini yaseYurophu kwaye zilumkisile ukuba iPalamente yaseYurophu ayisayi kurhoxa emsebenzini, inikwe inkxaso le nxalenye yesicatshulwa.
Ukuba oko bekungonelanga, iseshoni yepalamente yaseYurophu icele ukunyusa amandla ekuvuseleleni amandla kwi-European Union ukuya kuthi ga kwi-35% ngo-2030, xa kuthelekiswa nokujoliswe kuko ngama-27% ithunyelwe ngoku.
Ii-MEPs zivume iivoti ezingama-492, i-88 ngokuchasene ne-107 ingxelo ye-PSOE MEP uJosé Blanco, ebeka isikhundla sePalamente yaseYurophu malunga nothethathethwano ekufuneka luqale ngoku ngeBhunga le-EU, iziko elimele Amazwe angamaLungu, akhuthaza ukugcina ithagethi kwi-27%.
Kwinkomfa yeendaba, i-MEP emhlophe yongeze: «Namhlanje singatsho ukuba i-European Union inike umyalezo ocacileyo kwaye ungathandabuzekiyo ukuhlangabezana neenjongo zaseParis kunye nokukhuthaza utshintsho kumandla ngokusekwe kumandla acocekileyo kunye namandla ahlaziyekayo ”.
Ukufezekisa iinjongo ezintsha ezinokuhlaziywa, amazwe kufuneka abeke ezabo iinjongo zesizwe, eziya kulungelelaniswa ze zibekwe esweni yimanyano.
Ukongeza, i-MEPs ye-European Union ivumile ukuseka ithagethi yokusebenza ngamandla kwe-2030 nayo ye-35%, eya kuthi ibalwe ukusuka kuqikelelo lokusetyenziswa kwamandla ngaloo nyaka ngokuhambelana nemodeli ye-PRIMES, efanisa ukusetyenziswa kwamandla kunye nokubonelela i-EU.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » I-European Union iya kuyiphelisa irhafu ekusebenziseni ngokwakho